Back to School Special Sales
shopmyar.com account ကို ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ?
Shopmyar.com account ပြုလုပ်ခြင်းကတော့ လွယ်ကူမြန်ဆန်ကာ အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Shopmyar.com account ကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် ဖော်ပြထားသည့် နေရာကို နှိပ်လိုက်ပါ။ သင့်၏ email လိပ်စာ၊ မွေးနေ့၊ password ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဉ်းများအား လိုက်နာပါမည်ဟု သဘောတူပြီး နောက် သင့် ၏ Shopmyar.com Account အသစ်ဖြင့် ဈေးဝယ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ Shopmyar.com တွင် သင့်၏ ကိုယ်ပိုင် Facebook account ဖြင့်လည်း sign up ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Shopmyar.com ၏ လိပ်စာ ကရော?
ကျွန်ုပ်တို့လိပ်စာကတော့ 31(A) Nawaday Street, Dagon Township, Yangon, Myanmar ဖြစ်ပါတယ်။
Online တွင် ဈေးဝယ်ခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်သက်သာစေပါသလား ?
Online တွင် ဈေးဝယ်ခြင်းဖြင့် သင့်အချိန်အတော်များများကို ချွေတာနိုင်ပါလိမ့်မည်။
- ဈေးဝယ်စင်တာဆီသို့ ကားမောင်းသွားရန်၊ ကားပါကင်ထိုးရန်၊ တစ်မိုင်လောက်အကွာအဝေးကိုလည်း လမ်းလျှောက်သွားရန် ၊ ဈေးဝယ် ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် အိမ်ကို ပြန်ရောက်ရန် တစ်ကျော့ပြန်လျှောက်ရန် မလို အပ်တော့ပေ။
- သင် ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အချိန်တွင် ဈေးဝယ်နိုင်ကာ Shopmyar.com ကလည်း အမြဲတမ်း ဖွင့်ထားမှာဖြစ်ပါ သည်။ မနက် ၂နာရီတွင် သင်သည် ရုတ်တရတ် ကော်ဖီခွက်ဝယ်ယူလိုလာသောအခါ အသေးစိတ်အချက်အလက်များလုပ်ဆောင်ပြီး အခြားသော ဆိုင်ပိုင်ရှင်များအိပ်မောကျနေချိန်တွင် သင်မှာယူထားသည့် ကော်ဖီခွက်က သင့်ထံ လာနေပါပြီ။
- Shopmyar.com သို့ဝင်ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် သင်လိုချင်သည့် အရာများကို ဈေးဝယ်စင်တာ ၌ တစ်နေရာစီ တစ်နေရာစီ ရှာဖွေဝယ်ယူခြင်းတက်ပင် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- စက္ကန့်အနည်းငယ်တွင်း ( မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း အလုပ်ရှုပ်သောရက်များမှာတော့ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း) မှာပင် ရိုးရှင်းသော electronic transactions ကိုအသုံးချပြီး ၀ယ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Online မှာဈေးဝယ်လျှင် အချိန်မည်မျှ ကုန်မည်နည်း?
သင့်ကွန်ပြူတာမှစတင်ကာ Web နှင့်ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ ပြီးနောက် ဘယ်မှာ ဈေးဝယ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ ရံဖန်ရံခါတွင် သင်သည် ကွန်ပြူတာအဟောင်းအားအသုံးပြုမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ပုံမှန်ဖုန်းလိုင်းအားအသုံပြုခြင်းကြောင့် ကြာသင့်သော အချိန်ထက်ပိုမိုကြာတတ်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သင်မျှော်လင့်ထားသော အချိန်ထက်ပိုမို အချိန်ကြာနေခြင်းဖြစ်သည်။
- သေသပ်နေသည့် ကုန်ပစ္စည်းများက သင့်ကို စိတ်ပျံ့လွင့်စေမှာပါ။ သင်က ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအား ကြည့်ခြင်းထက် အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှာဖွေခြင်းက သင့်အား ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားအကြောင်း၊ မြောက်များစွာသော ကုန်ပစ္စည်းများအကြောင်း နှင့် ဈေးနှုန်းနိုင်းယှဉ်ခြင်းတို့နှင့်ပါတ်သတ်ကာ ပိုမိုသိရှိစေနိုင်ပါသည်။
- ဆိုင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနေရာတွင်ဖြည့်သွင်းခြင်း (သို့) ပထမဆုံးအကြိမ် မှာယူသည့် ဖောင်အားဖြည့်သွင်းခြင်းမှာတော့ သင့်အမည် နှင့် လိပ်စာကို ဖြည့်သွင်းရခြင်းများပါဝင်ပါမည်။ သင်က စာရိုက်ရာမှာ တစ်လုံးချင်းစီရိုက်တတ်သူ ဖြစ်နေခဲ့ပါက မိနစ်အနည်ငယ်ခန့် ကြာနေပါလိမ့်မည်။
- ဖုန်းများ၊ ကွန်ပြူတာများ သို့မဟုတ် မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်း များအား မှာယူခဲ့ပါက တစ်ရက်၊ နှစ်ရက် သို့မဟုတ် တစ်ပါတ်ခန့်အထိ စောင့်ရတတ်ပါသည်။၀ယ်ယူသူတော်တော်များများအနေဖြင့် ဖုန်းနှင့် ကွန်ပြူတာများဝယ်ယူခြင်းအတွက် ၁ ရက်( သို့မဟုတ)် ၂ ရက်အတွင်းဝယ်ယူခြင်း က အတော်အသင့်ဖြစ်ကာ တစ်နာရီမျှစောင့်ရန် မလိုအပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြင်ပရှိအရောင်းဆိုင်များ တွင်သာ သွားရောက်ဝယ်ယူခြင်းက အချိန်ကုန်သက်သာစေမည် ဖြစ်သည်။
Website ပေါ်တွင်ဈေးဝယ်ခြင်းဖြင့် ပိုက်ဆံချွေတာနိုင်ပါ့မလား ?
သယ်ယူပို့ဆောင်ခအားပေးရသော်လည်း Online ပေါ်တွင်ဈေးဝယ်ခြင်းက လက်ငင်းငွေချေကာဝယ်ယူရသည့် လက်ကားဆိုင်များတွင်ဝယ်ယူရမည့်ပိုက်ဆံပမာဏထက် ပိုက်ဆံ ချွေတာနိုင်ပါသည်။
သပ်ရပ် အချိုးကျသည့် ကုန် ပစ္စည်းများအား Online တွင် ရှာဖွေရရှိနိုင်ပါ့မလား?
တစ်ကယ်တော့ သင်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုအား တွေ့ကြုံပြီးသည့်အခါ အခြားသူများဝယ်ယူနေသည့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် ကုန် ပစ္စည်းများအား မြင်တွေ့ပြီး သင်ကိုယ်တိုင်ပင် အံ့သြမှင်သက် ရပါလိမ့်မည်။ ရုတ်တရက် အချို့သောကုန်ပစ္စည်းများက အံသြဖွယ် အထူးပြုခံရပြီး မည်သို့ဖြစ်လာသည် နှင့် ၀ယ်ယူသူများနှင့် ဆက်ဆံရခြင်း နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများတွင် မည်မျှသောရှုပ်ထွေးမှုများ ကိုရင်ဆိုင်နေရသည် ကို မြင်လာရ ပါလိမ့်မည်။
၀ယ်ယူလိုသော ကုန်ပစ္စည်း အကြောင်းအား စုံစုံလင်လင်သိရပါ့မလား?
Shopmyar.com တွင်ရရှိနိုင်သောအချက်အလက်ပမာဏများမှာ များပြားသည့်အတွက် စုံစုံလင်လင်သိရှိရမှာဖြစ်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင် သာမန်ဆိုင်တစ်ဆိုင်၏ ဈေးရောင်းသူတစ်ဦးနှင့်ပြောဆိုခြင်းထက်ပင် ပိုမိုသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဖန်ကောင်တာတွင်းရှိ ကုန်ပစ္စည်းများအား နှံနှံစပ်စပ်မသိသောအရောင်းစာရေးမနှင့် ပြောဆိုနေရခြင်းထက် ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း အားရှင်းလင်းချက်များပါဝင်နေပြီး တစ်ခါတစ်ရံကုန်ပစ္စည်း၏ ထူးခြားချက်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ပြုလုပ်ခြင်းလိုအပ်ချက်များ၊ ရွေးချယ်နိုင်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ နှင့် သုံးစွဲသူများ၏ ဝေဖန်အကြံပြုချက်များကို ပါ ဖတ်ရှုနိုင်သည့် အားသာချက်များရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Website ဆိုတာကတော့ သုံးသပ်ချက်များ၊ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ၊ ဝေဖန်မှုများ နှင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ တစ်စုတစ်ဝေးတည်းတည်ရှိသောနေရာကြီး တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ဟာ ကုန်ပစ္စည်းနယ်ပယ် အား စိမ်းနေသူဖြစ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့Shopmyar.com မှတဆင့် မည်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများကိုရရှိနိုင်သည် ၊ကုန်ပစ္စည်းကောင်း နှင့် သာမန် ကုန်ပစ္စည်းအား မည်သို့ခွဲခြားရမည် နှင့် မည်သို့သော ပုံပန်းသဏန်မျိုးအားလိုချင်သည် အစရှိသည့်များ အားသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်online မှတဆင့် ၀ယ်ယူသူများကတော့ ဈေးဝယ်စင်တာသို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဝယ်ယူသူများ ပိုမို အချက်အလက်စုံလင် ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအားဝယ်ယူပြီးနောက် ၀ယ်ယူထားသော ဖုန်းအတွက် အနည်းငယ်သော ၀န်ဆောင်မှုများဖြစ်သည့် ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် ထည့်သွင်းပေးခြင်း တို့သာ ရရှိနိုင်မည်။ သို့သော်လည်း နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာများအတွက်ကိုတော့ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဆက်သွယ်ရပါမည်။
Online Shopping များ၏အဓိကဆွဲဆောင်မှုသည် အမည်ဖော်ပြရန်မလိုအပ်ခြင်း ဟုဆိုကြသည်။
လူအုပ်ကြားတိုးဝေ့ ၀ယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါ၊ အရောင်းစာရေးအားစောင့်နေစရာမလိုအပ်ပါ၊ အတွင်းခံအ၀တ်အစားများနှင့် အခြားသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူသည့်အခါတွင်လည်း ရှက်ကြောက်နေရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
ငွေချေဘောင်ချာတိတ် လဲလှယ်ခြင်းအားလည်းစောင့်နေရန်မလိုအပ်ပေ၊ လူအုပ်ကြားတိုးဝေ့ ၀ယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါ၊ အရောင်းစာရေးအားစောင့်နေစရာမလိုအပ်ပါ၊ အတွင်းခံအ၀တ်အစားများနှင့် အခြားသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူသည့်အခါတွင်လည်း ရှက်ကြောက်နေရန် မလိုအပ်တော့ပါ။
အချို့သော ပစ္စည်းများက အခမဲ့လား ?
ဟုတ်ပါတယ် ၊ သို့သော်လည်း ပမာဏနှင့် အရည်အသွေးကတော့ ကုန်ပစ္စည်းအပေါ်မူတည်ကာ ပြောင်းလဲသွားမည်။
လိုချင်သော ပစ္စည်း Online မှာ ရှာပြီး အပြင်ဆိုင်မှာ သွားဝယ်လို့ရမလား?
ရပါတယ်။လူတော်တော်များများကလည်း Website ကို ၀ယ်ယူလိုခြင်း ထက် ရှာဖွေလိုခြင်း ကြောင့် ပိုမိုဝယ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။
အပြင်မှာကိုယ်တိုင်ဝယ်ခြင်းကြောင့်ရရှိသော အချို့သော အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။ မကျေနပ်ချက်များရှိပါကလည်း ပြောဆိုနိုင်သည့် လူရှိသည်၊ ၀ယ်ယူလိုသော ကုန်ပစ္စည်းအား ထိတွေ့ကိုင်တွယ်နိုင်သည် ၊ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ပြီးနောက်လည်း ခဏတာ အနားယူနိုင်ပါသည်။
Website မှာတော့ နှစ်သက်သည့် ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းရှာဖွေသိရှိပြီးနောက် အပြင်က ရောင်းချသူများနှင့် ဈေးဝယ်စင်တာသို့ သွားရောက်နိုင်သည်။ Online တွင် ပြီးပြည့်စုံသော ကုန်ပစ္စည်း ကိုရှာဖွေရရှိနိုင်ပေမယ့် အပြင်က ဆိုင်မှာတော့ အချို့ ကုန်ပစ္စည်းများ ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ နှင့် အချို့သော အမျိုးအစားများကိုတော့ ရှာတွေ့ချင်မှ ရှာတွေ့ပေလိမ့်မည်။ အချို့ဆိုင်တွေမှာတော့ ပိုမိုကောင်းမွန်ဈေးကြီးပြီး အချို့မှာတော့ ဈေးချို သော်လည်း ဆိုးရွားသော ကုန်ပစ္စည်း များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
Account ၏ paasword ကိုဘယ်လိုအသစ်ပြန်လုပ်ရမလဲ?
မေ့သွားသည့် password ကိုအသစ်ပြန်လုပ်ရန် -
၁. Menu bar မှ Account ဆိုသည့် နေရာလေးကိုနှိပ်ပါ။
၂. Login Menu ၏ ညာလက်တွင်ရှိသော forget your password ကိုနှိပ်ပါ။
၃. သင့် Account နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် email ဖြင့် confirm the email address တွင်ဖြည့်လိုက်ပါ။
၄. Reset Password အားနှိပ်ပြီး သင်တောင်းဆိုထားသည့် email အားလက်ခံလိုက်ပါ။
၅. Email တွင်ဖော်ပြထားသည့် Link ကိုနှိပ်ပါ။
၆. သင့်၏ ဂဏန်း ၈ လုံးမှ ၁၂၈ လုံးတွင်းရှိသော password အသစ်အား ထည့်သွင်းလိုက်ပါ။
၇. Reset password ဆိုသည့် ခလုပ်အားနှိပ်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါပြီ။
Password ပြောင်းရန် တောင်းဆိုထားသည့် Email အားပြန်လက်ခံမရရှိခဲ့ပါက ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲ ?
လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ Password အသစ်ပြုလုပ်သည့် တောင်းဆိုခြင်းအတွက် web page မှနေကာ သုံးစွဲသူများအတွက် အထူးတလည် စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများအတွက် အကောင်းဆုံး လုံခြုံရေးပေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဒီ အဆင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ လည်း မရှောင်ရှားနိုင်ပါဘူး။
အကယ်ရ်ျ များpassword အသစ်မပြုလုပ်နိုင်ပါက createanew account တွင်အကောင့်အသစ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အပို email မရှိခဲ့ပါက guest အဖြစ်နှင့်လည်း ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ် အကောင့်မှ Email အားဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ ?
Shopmyar.com ရှိ သင့်အကောင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် email လိပ်စာအားပြောင်းလဲလိုပါက အောက်ပါအချက်များအတိုင်း လိုက်လုပ်ရန် -
၁. ပထမဆုံး သင့်၏ shopmyar.com အကောင့်အား Login ပြုလုပ်ပါ။
၂. Menu bar ရှိ Account နေရာအား နှိပ်လိုက်ပါ။
၃. Edit ဆိုသည့် နေရာအား နှိပ်လိုက်ပါ။
၄. Email address ဆိုသည်ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မည်။
၅. Edit your email address ဆိုသည့်နေရာတွင် သင်နှစ်သက်သော email လိပ်စာထည့်သွင်းပါ။
၆. Save Changes ဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
Password အား ဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲ?
သင့် Shopmyar.com အကောင့်၏ password အားပြောင်းရန် အောက်ပါအချက်များအတိုင်းပြုလုပ်ရန် -
၁. ပထမဦးဆုံး Shopmyar.com အကောင့် အား Login ပြုလုပ်ပါ။
၄. Password နေရာအားရှာတွေ့မည်။
၅. Password အား အတည်ပြုပါ။
၆. save changes ဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
Shopmyar.com တွင် အကောင့် အား Sign In နှင့် ကျွန်ုပ်အကောင့်တွင်းအချက်အလက်များအား မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်နည်း?
ဦးဆုံး Shopmyar.com တွင် create an account ပြုလုပ်ပါ။ ထိုမှသာ Log In အားနှိပ်ပြီးနောက် သင့်အကောင့်အား ချိတ်ဆက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုမှတဆင့် သင့်အား Email လိပ်စာနှင့် password များဖြည့်သွင်းကာ အကောင့်ပြုလုပ်နိုင်သည့် နေရာအားခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ သင့်၏ အချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးနောက်တွင် သင့်အကောင့်မှ အချက်အလက်များ ပေါ်လာပါလိမ့်မည် ထို့နောက် သင်အနေဖြင့် ထပ်မံ စစ်ဆေးခြင်း (သို့မဟုတ်) အကောင့်တွင်းမှ ထွက်ခြင်း စသည်တို့ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Shopmyar.com ၏ ပစ္စည်းပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း မူဝါဒ ဆိုသည်မှာ?
ကျွန်ုပ်တို့ shopmyar.com အနေဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းမူဝါဒအား အပြစ်အနာအဆာကင်းကင်းနှင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ၇ ရက်အတွင်း ပေးပို့ရမည် ဟူသော ဤ နယ်ပယ်တွင်းအကောင်းဆုံးနည်း မူဝါဒ အား ပြုလုပ်ထားသည်။shopmyar.com မှတဆင့် ပို့ဆောင်ခံရသည့်မည်သည့် ပစ္စည်းမဆို မည်သည့်အကြောင်းရင်းကြောင့်မဆို ပို့ဆောင်ပြီး ၇ ရက်အတွင်း ပြန်လည်းပေးနိုင်သည်။ (ထိုပစ္စည်း များရှာတွေ့သော အချိန်နှင့် မသတ်ဆိုင်ပါ။)
Shopmyar.com မှ ပစ္စည်းအားပြန်လည်ပေးအပ်ရာတွင် ကန့်သတ်ခြင်းတွေများရှိနိုင်သလား?
Shopmyar.com သည် Via Shopmyar.com ပစ္စည်းများအား ပြန်ပေးခွင့်ရှိအောင် ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အချို့သော ပစ္စည်းများသည် ပြန်ပေးမရနိုင်သည့် ပစ္စည်း နှင့် လက်ခံမပေးနိုင်သည့် ပစ္စည်း များ အစရှိသည့် ကန့်သတ်ချက်များရှိနေပါသည်။
ပျက်စီးနိုင်သောပစ္စည်း ၊ အတွင်းဝတ်ရသည့်အထည်များ၊ စားသောက်ကုန်များ ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပပစ္စည်းများ
ကျန်းမာရေး နှင့်ဘေးကင်းစေရေးအတွက် Shopmyar.com သည် စားသောက်ကုန်များ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာများ၊ ပျက်စီးနိုင်သော ပစ္စည်း အားပြန်လည်ပေးခြင်း အား ခွင့်မပေးပါ။ ဖွင့်ဖောက်ပြီး သော ပျက်စီးနိုင်သော ပစ္စည်း နှင့် မဖွင့်ဖောက်ထားသော ပျက်စီးနိုင်သော ပစ္စည်းများ၊ စားသောက်ကုန်များ၊ သောက်သုံးနိုင်သော အရည်များ၊ ဆပ်ပြာများ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ဆပ်ပြာမှုန့်များ၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေးသုံး ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါးများ၊ အတွင်းခံများ၊ လက်ဝတ်ရတနာ နှင့် အခြားသော ပါတ်တီး တစ်ခုတည်းသုံးရသည့် ဆေးဘက်သုံး ပစ္စည်းများ လည်းပါဝင်နေသည်။
ဒေါင်းလော့ပြုလုပ်မရနိုင်သည့် စာအုပ်များကတော့ ပြန်လည်ပေးနိုင်ပါသည် သို့သော် စာအုပ်အားလက်ခံရရှိ သည့်အခြေအနေအတိုင်း အပြစ်အနာဆာ မရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ( ဥပမာ - နဂိုခေါက်ရာတိုင်းရှိနေရမည်၊ စာမျက်နှာများမခေါက်နေရပါ။ အမှတ်အသားများမရှိရ အစရှိသဖြင့်)
ပစ္စည်းအမျိုးအစားမတူသည့် အခြားသော ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်လဲလှယ်ခွင့်ရှိသလား ?
Shopmyar.com သည် ၀ယ်ယူအားပေးသူများအား အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများပေးနေသော်လည်း ပစ္စည်းအမျိုးအစားမတူသည့် အခြားသော ပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်လဲလှယ် မပေးပါ။ သင်ပြန်ပေးလာသည့် ပစ္စည်း အား အလိုမရှိပါက သင်နှစ်သက်ရာ အခြားပစ္စည်းတစ်ခုအား သီးသန့် မှာယူနိုင်ပါသည်။
ပစ္စည်း အမှားအား လက်ခံရရှိခဲ့ပါက ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
သင်မှာယူသည့်အချိန်မှာ ၀င်သွားသည့် စာရင်းအတိုင်း သာ သင်အနေဖြင့် အမြဲ လက်ခံရရှိ သင့်သည်။ အရောင်ပင် လွဲသွားခဲ့သည် ရှိသော် ကျွန်ုပ်တို့အားချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီပေးပါမည်။
ပစ္စည်း အစိတ်အပိုင်းများ မပါလာ ပျောက်နေသော အခါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ?
စက်ရုံတိုင်းထုတ်လုပ်သူတိုင်းသည် ပစ္စည်းတိုင်း၏ ထုတ်ပိုးမှုတိုင်းအတွက် အပိုပစ္စည်းအား တပါတည်း ထုတ်ပိုးပေးခြင်းမပြုသည့်အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှလည်း အပို ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ပေးရန်လည်းမရှိပါ။ ရှိခဲ့လျှင်လည်း သင့်အား ထိုပစ္စည်းအားလဲလှယ်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးအားရွေးချယ်စေချင်ပါသည်။
ပစ္စည်းလဲရခြင်း အစား မပါလာသော ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း ကိုသာ လိုချင်ပါက စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူအား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ သင့်အား ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ မလုပ်ပေးနိုင်ခြင်းသည် သင့်လက်ဝယ်ရှိ ပစ္စည်း ၏serial နံပါတ်၊ မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အချက်အလက်များ နှင့် အစရှိသည့် ပစ္စည်းနှင့် သတ်ဆိုင်သည်များအား မေးမြန်းမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မှာယူထားသည့်ပစ္စည်း မှာ အပြည့်အစုံမပါလာခြင်း နှင့် ပျက်ဆီးယိုယွင်းခြင်းဖြစ်ခဲ့လျှင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ?
Shopmyar.com မှတဆင့် ပို့ဆောင်ပေးလျှက်ရှိသည့် အရွယ်အစားကြီးမားသော ပစ္စည်းများ ( ၃၂ လက်မ နှင့် ၃၂ လက်မအထက် တီဗီများ ၊ အ၀တ်လျှော်စက်များ၊ အခြောက်ခံစက်များ နှင့်ရေခဲသေတာ များ) တို့သည် အထူးကုန်စည်ပို့ဆောင်ပေးခြင်း ၀န်ဆောင်မှုလိုအပ်သည်။ ပို့ဆောင်လာသော ပစ္စည်းများအား လက်ခံရရှိသည့်ပြေစာတွင် လက်မှတ်မထိုးခင်သေချာစစ်ဆေးပေးပါ။ အပြည်အစုံမပါလာပါက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ကာ လဲလှယ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ပို့ဆောင်လာသော ပစ္စည်းမှာ ပျက်စီးခဲ့သည်ရှိသော်
ပစ္စည်းကတော့ ပျက်စီးနေပြီး ပို့ပေးသူကတော့သင့်နှင့်အတူရှိနေဆဲဆိုပါက ပို့ဆောင်ပေးသည့်ပြေစာ စာရွက်ပေါ်ရှိ Note အား သိမ်းထားပါ။ ပို့ဆောင်ပေးသည့်သူ မှတဆင့် ပျက်စီးနေသည့် ပစ္စည်း အား Shopmyar.com တွင် လာအပ်နှံပေးပါ။
ပို့ဆောင်သူမှ ပစ္စည်းအား ငြင်းဆိုသည့်အခါများတွင် ကျွနိုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပေးပါ။ သင်နှစ်သက်သောအရာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲရှိ ပစ္စည်း တို့အပေါ်မူတည်ကာ ငြင်းဆိုမှုအား အတည်ပြုပြီးသောအခါတွင် သင့် ၏ လဲလှယ်မှုကိုဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
ပျက်စီးမှုက ပို့ပေးသူထွက်သွားပြီးနောက်မှသိရသည့်အခါ ပို့ဆောင်ပေးသူအား အမြန်ဆက်သွယ်ကာအခြေအနေအားအသိပေးပါ။
နောက် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပြီး လဲလှယ်အစားထိုးခြင်းအတွက် ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။ အောက်ပါအချက်များ ကိုလည်း အသင့်ပြင်ပေးရန် -
ပျက်စီးသောအစိတ်အပိုင်း၏ ဓာတ်ပုံ ( ရနိုင်ပါက )
မည်သို့လက်ခံရရှိခဲ့ပုံ ( အိမ်ရှေ့တွင်ထားသွားသည်၊ လက်မှတ်လက်ခံရရှိသွားသည် အစရှိသဖြင့်)
ဖော်ပြထားသည့်အချက်များအားစုံလင်စွာပြုလုပ်ပြီးမှသာ Shopmyar.com ထံသို့ပေးပို့ပေးပါ။
ထို့နောက် ပစ္စည်းအား သူကိုယ်တိုင်မခွာနေစေပါနှင့်၊ အခြားသော ပို့ဆောင်ထားသည် ဗူး နှင့် ထုပ်ပိုးထားသော ပစ္စည်း များပါ ပါဝင်သည်။ ထို့ပစ္စည်း များမှတဆင့် ပို့ဆောင်သူလက်တွင် မည်သို့ဖြစ်သည်အား စုံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုပစ္စည်းများမပါပါက သင့်၏ ပျက်စီးခြင်းဖော်ပြမှုများအား ပို့ဆောင်ပေးသူ ၏ အဆိုဖြင့် ငြင်းဆိုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
မပြည့်စုံခြင်း ဆိုသည်မှာ ?
Shopmar.com ၏ ပစ္စည်း များသည် ပျက်စီးခြင်းလည်းမဟုတ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်စေချင်သကဲ့သို့အလုပ်မလုပ်ခြင်း အား မပြည့်စုံခြင်းဟုခေါ်သည်။
Shipping and Deliveries ( သယ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်းများ )
ဘယ်လိုမျိုး သယ်ဆောင်ခ အခမဲ့ ရနိုင်သလဲ?
အချို့ ပစ္စည်းများသည် သယ်ဆောင်ခ အခမဲ့ရရှိရန်အတွက်အောက်ပါအချက်များနှင့်ကိုက်ညီရမည်။ ဖော်ပြထားသည့်အချက်များသည် စစ်ဆေးနေသည့်အချိန်အတွင်းကိုက်ညီမှသာ သယ်ဆောင်ခ အခမဲ့ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပေးထားသည့်စာရင်းတွင်သယ်ဆောင်ခ အခမဲ့ဆိုသော တံဆိပ်ပါသည့် ပစ္စည်းများ သည်လည်း သယ်ဆောင်ခ အခမဲ့ ဖြစ်သည်။
သင်သည် သယ်ဆောင်ခ အခမဲ့ခွင့် ရရှိနေသော်လည်း အခမဲ့ခွင့်မရှိသော ပစ္စည်းများပါဝင်နေခဲ့ပါက သင်အနေဖြင့် သယ်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
သယ်ဆောင်ခအခမဲ့ဖြစ်စေသည့်အချက်များ ဖျက်သိမ်းခံရပါကလည်း သယ်ဆောင်ခ အခမဲ့ တော့မည်မဟုတ်ပေ။
ရန်ကုန်တိုင်းအပြင်ဘက်နှင့်အခြားသော ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများ ၊ နိုင်ငံခြားမှ မှာယူခြင်းများအတွက်ကတော့ သယ်ဆောင်ခ အခမဲ့ အား ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ရွေးချယ်ထားသည့် ပစ္စည်းများသည်အလေးချိန်ကန့်သတ်ထားသည်။ ပစ္စည်းများစုစုပေါင်းနှင့် မှာယူခြင်းက အလေးချိန်ကန့်သတ်ခြင်းအားကျော်လွန်နေပါက သယ်ဆောင်ခ အခမဲ့ခွင့်မရှိနိုင်တော့ပေ။
အထူးမှာယူခများ၊ ကိုင်တွယ်ခများ နှင့်အခြားသော ကုန်ကျစရိတ်များသည် သယ်ဆောင်ခ အခမဲ့နှင့် သတ်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။
သယ်ဆောင်ခ အခမဲ့ပေးခြင်း အား ပြောင်းလဲခြင်း ရပ်ဆိုင်းခြင်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့ ဆုံးဖြတ်မှုပေါ်တွင်သာ မူတည်ပါသည်။
မှာယူပြီး အချိန်ဘယ်လောက်လောက်ကြာကြာစောင့်ပြီးနောက် ပစ္စည်းအား လက်ခံရရှိမည်နည်း?
မှာယူခြင်းများသည် မှာယူသည့်အချိန်မှ ၄၈ နာရီအတွင်းမှာပင် ကျွန်ုပ်တို့ ဂိုဒေါင်မှ ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာယူခြင်းကတော့ ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အတွင်း လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်အပြင်ဘက် နေရာများကတော့ ၁ပါတ် မှ ၂ ပါတ်အတွင်းကြာနိုင်ပါသည်။
main page ၏ ဘယ်ဘက်ရှိ ( Category) အမျိုးအစားအား နှိပ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင်ရရှိနိုင်သော ကုန်ပစ္စည်းများအား တွေ့ရှိရပါမည်။ Search Bar အား အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်း သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော ကုန်ပစ္စည်း များကို ကျွန်ုပ်တို့ပေ့ခ်ျ တွင် ရှာဖွေနိုင်ပါသေးသည်။
Online တွင် မှာယူခြင်းက စိတ်ချရပါ့မလား?
စိတ်ချရပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှနေကာ သင်တို့မှ website တွင်ပေးထားသည့် အချက်အလက်များကို အတတ်နိုင်ဆုံးဂရုစိုက် ကိုင်တွယ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် server သည်လည်း Credit Card နှင့် အခြားသော ၀ယ်ယူသူများ၏ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များအား Internet-standard SSL (Secure Sockets Layer) နည်းလမ်းအားအသုံးချကာ အချက်အလက်အားလုံးအား ကာကွယ်ပေးထားပါသည်။ အချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းစဉ်တလျှောက်လုံးလည်း အချက်အလက်များသည် အင်တာနက်မှ တဆင့် ဖြတ်သန်း သွားသည့်အခါတွင် ဖတ်ရှုမရနိုင်လောက်အောင်သေးငယ်သောcode လေးများဖြစ်သွားပေသည်။ အချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက် သီးသန့် တမူထူးခြားစွာ ဖြင့် Code ဖြေပေးမည်ဖြစ်သည်။
သင်တို့မှာယူသည့်အခါပေးပို့သည့် အချက်အလက်အားလုံးအား ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ထမ်းများမှနေကာ စည်းကမ်းကြီးကြီးဖြင့်ကိုင်တွယ်မည်ဖြစ်ကာ ၀န်ထမ်းများသည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံရေးနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည်နေမည်ဖြစ်သည်။ အကယ် ၍ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာများနှင့် မှာယူခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပါတ်သတ်က info@shopmyar.com သို့ တိုက်ရိုက် email ဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ .
၀ယ်ယူလိုသည့် ပစ္စည်းများကို ဈေးဝယ်ခြင်းထဲကိုဘယ်လိုထည့်မလဲ?
၀ယ်ယူလိုသည့် ပစ္စည်းများကို ဈေးဝယ်ခြင်းထဲကိုထည့်ရန်အတွက် ပေ့ခ်ျအတွင်းရှိသင်နှစ်သက်သော ပစ္စည်းများ ရှိရာသွားကာ ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ( Add To cart ) အားနှိပ်လိုက်သည့်အခါ သင်ဝယ် ယူလိုသည့် ပမာဏအား ရွေးချယ်နိုင်သည့် Shopping Cart ရှိရာ သို့ သင့်အားခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကွန်ပြူတာမျက်နှာပြင်၏ ညာဘက်ရှိ ( Quantity ) အားအသုံးပြုကာနှစ်သက်ရာ အရေအတွက်ပမာဏရွေးချယ်ကာ မှာယူနိုင်ပါပြီ။ သင့်ဘက်မှ အရေအတွက်အား ရွေးချယ်ပြီးနောက် ဆက်လက်ဈေးဝယ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သလို မှာယူခြင်းအား အဆုံးသတ်နိုင်ပါသည်။
ဦးစွာ ကွန်ပြူတာမျက်နှာပြင်ညာဘက်အပေါ်နားက (my cart) အားနှိပ်ပါ။ သင့် လက်ရှိ ဈေးခြင်းတွင်းမှ ပစ္စည်းများကို မြင်ရပါလိမ့်မည်။ ပယ်ဖျက်လိုသည့် ပစ္စည်းအားရွေးချယ်ပြီးနောက် ( Remove) အားနှိပ်ပါ ပြီးနောက် ထပ်မံ ပြုလုပ်လိုပါက ( update cart) အားနှိပ်ပါ။
ဈေးဝယ်ခြင်းထဲမှ အရေအတွက်ပမာဏအား ဘယ်လိုပြောင်းနိုင်မလဲ?
ဦးစွာ ကွန်ပြူတာမျက်နှာပြင်ညာဘက်အပေါ်နားက (my cart) အားနှိပ်ပါ။ အားနှိပ်ပါ။ သင့် လက်ရှိ ဈေးခြင်းတွင်းမှ ပစ္စည်းများ နှင့်သင်ရွေးချယ်ထားသည့် အရေအတွက်များကို မြင်ရပါလိမ့်မည်။ သင်ရွေးချယ်ထားသည့် အရေအတွက်အားပြောင်းလိုပါက ( Quantity) ဆိုသည့်နေရာအားသွားကာ သင်ပြောင်းလိုသည့်အရေအတွက်အားရိုက်နှိပ်ပါ ပြီးနောက် Update Cart အားနှိပ်ပြီး ပြောင်းနိုင်ပါသည်။ပြုလုပ်ပြီးနောက် အရေအတွက်နှင့် ဆက်စပ် ဒေါ်လာ ပမာဏ များပါအလိုလျောက်ပြောင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး မှန်ကန်တိကျသော အရေအတွက်နှင့်ငွေပမာဏကို ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
မှာယူပြီးနောက် ပို့ဆောင်ပေးရမည့်လိပ်စာအား ပြောင်းခွင့်ရှိမလား?
ရပါတယ်၊ ငွေပေးချေရန် အတွက်အချက်အလက်များဖြည့်ပြီးနောက်တွင် ပြောင်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း မှာယူပြီး ၃ နာရီအတွင်း 01530977 သို့ ခေါ်ဆိုပြီး ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
မှာယူထားသည့် ပစ္စည်းများစာရင်း ကိုဘယ်လိုပြန်ကြည့်နိုင်မလဲ?
သင့်၏ Shopmar.com အကောင့်မှ မှာယူထားသည့် ပစ္စည်းစာရင်းသည် သင့်၏ မှာယူထားသည့်အချက်အလက်များ၊ မှာယူထားသည့် အမှာစာများ၊ နောက်ယောင်ခံအချက်အလက်များ၊ရောင်း ချသူများ၏အချက်အလက်များအစရှိသည်တို့အား ကြည့်ရှုနိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။
၁. Shopmyar.com homepage ရှိ (My account) အားနှိပ်ပါ။
၂. သင့် Profile အောက်ရှိ View Order History Button အားနှိပ်လိုက်ပါ။
မှာယူခြင်းက Shopmyar.com အကောင့်တွင်မပေါ်လာပါက ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
သင့်၏မှာယူခြင်းအား ရှာဖွေမရပါက ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပါတ်သတ်သည့် အခြားသောအချက်အလက် များကို ဘယ်လိုရှာနိုင်မလဲ?
Shopmyar.com တွင် ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပါတ်သတ်သည့် အချက်အလက်များကို ရနိုင်သမျှစုံစုံလင်လင်တင်ပြပေးထားသည်။
ထို့ထပ်ပိုမိုသော အချက်အလက်များအား လိုချင်ပါက ထုတ်လုပ်သူ သို့ထုတ်ဝေသူတို့ ၏ ကိုယ်ပိုင် website တွင်သွားရောက်ရှာဖွေနိုင်သည်။
ကိုယ်ပိုင် website နှင့်အခြားသော site တွင် တစ်ခါတစ်ရံ ကုန်ပစ္စည်း၏ အထူးပြုသော အပြင်ပုံပန်းများ၊ အရွယ်အစား၊အလေးချိန်၊ ပါဝင်သော တန်ဆာပလာများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအချိုးအစားများ၊ထုတ်ဝေခြင်း၊Version များ၊အရောင်၊ အခြားသော ပစ္စည်းနှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း နှင့်အခြားသော အချက်များ….
Shopmyar is pleased to inform you all of our innovative rewards system to give back to our customers. Upon registration each customer will be rewarded 10,000 Ks worth of rewardpoints that will be available for use on future purchases. For every 10,000 kyats worth of product purchased, you will be awarded 1 point. These points can be accumulated over time which can beredeemed for cash purchase on future purchases through the site. Customers can redeem their accumulated points when purchasing the product up to 50% of product’s cash value. Additional points willbe awarded to those who’s purchase of products that are over 200,000 kyats. On every increment of 200,000 additional 10,000 ks worth of points will be awarded to the users accumulated points that canbe used for purchase.
Shopmyar is proud to offer all customers in Myanmarafree shipping through our in-house logistics team. To our customers in Yangon, confirmed purchases before noon, Shopmyar isproud to inform you we will be able to provide you withanext day delivery. For customers outside of Yangon, depending on the destination, our logistics partners will deliver the product in the quickestperiod of time.
မှာယူနေစဉ် မှာယူခြင်းသည် ခွင့်ပြုခြင်း နှင့် လိုအပ်သည်များ ဖြည့်စွက်ခြင်းစသည့် အဆင့်၂ ဆင့်အားဖြတ်ကျော်ပြီးမှသာ ပြီးမြောက်သည်။ ခွင့်ပြုခြင်း ဖြစ်စဉ်သည် သင့်မှာယူမှုအား စစ်ဆေးပြီးမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လိုအပ်သည်များဖြည့်စွက်ခြင်းကတော့ ရောင်းချသူ သို့ ဂိုဒေါင်မှတဆင့် သင်လိုအပ်သော ကုန်ပစ္စည်းအားထုတ်ပေးမည် ၊ ထုတ်ပိုးကာ ပို့ဆောင်ပေးမည် ကုန်ပစ္စည်း အားပို့ဆောင်မည့် အရာများအား စီစဉ်ရသည်။
သိုလှောင်ရုံသို့ပို့ဆောင်ခြင်း Shopmyar.com မှတဆင့် ပို့ဆောင်မှာယူမှုများအတွက်ကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ သင့်မှာယူမှုအား စီစစ်ပြီးသည်နှင့် သိုလှောင်ရုံသို့ပေးပို့သည်။
သယ်ယူုခြင်းဖြစ်စဉ် Shopmyar.com မှတဆင့် ပို့ဆောင်မှာယူမှုများအတွက်ကတော့ သင် မှာယူထားသော ကုန်ပစ္စည်း သည် စင်များကြားမှ ကောက်ယူ ထုပ်ပိုးပြီးနောက် သဘောင်္နောက်ပိုင်းတွင် သေသေချာချာ ထပ်ပြီးပို့ဆောင်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။
သယ်ယူပြီးနောက် Carrier နှင့် နောက်ယောင်ခံပါဝင်သော ကုန်ပစ္စည်းများကို သင့်၏ မှာယူထားသည့်စာရင်းမှတဆင့် ရရှိနိုင်မည်။
မှာယူထားစဉ် သင်မှာယူထားသည့်ပစ္စည်းအား ကျွန်တော်တို့ဘက်မှနေကာ အတတ်နိုင်ဆုံးပို့ဆောင်နိုင်ရန်ကြိုးစားနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထောက်ပံ့ပေးသူများထံမှ မျှော်မှန်းထားသည့်အချိန်တွင်ရောက်မလာခြင်း နှင့် သင်မှာယူထားသော ကုန်ပစ္စည်းသည် ကြိုတင်မှာယူထားခြင်း စသည်တို့မှအပ သင့် ကုန်ပစ္စည်းသည် အချိန်မှီရောက်မည်ဖြစ်ပြီး သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှလည်း သင့်ထံသို့ သင်၏မှာယူခြင်းနှင့်ပါတ်သတ် သမျှအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ email ပို့ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ပယ်ဖျက်ခံရခြင်းသင်မှာယူထားသည့် ပစ္စည်း၏အမှာသည် ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရပါပြီ။